Dood: Waxa ay ku xirantahay Blacks / Africans, inay kor u qaadaan dhaqankooda "Blacks / Africans, waa inaad kor u qaaddaa dhaqankaaga aduunka oo dhan, cid kale ma kuu qaban doonto"
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 19, 2019 00: 20 No Comments
Faransiisku ma joojinayaan inay noqdaan Faransiiska sababtoo ah waxay ku nool yihiin Shiinaha, Afrika ama Australia.
Shiinuhu ma joojinayaan inay noqdaan Shiinaha sababtoo ah waxay ku nool yihiin Faransiiska, Afrika ama Ameerika.
Dadka Mareykanka ma joojinayaan inay noqdaan Mareykan maxaa yeelay waxay ku nool yihiin Faransiiska, Japan ama Afrika.
Marka waa maxay sababta ay dadka afrikaanka ahi u joojinayaan inay Afrikaan ahaadaan maxaa yeelay waxay ku nool yihiin Faransiiska, Mareykanka, Shiinaha, ama Australia ?
Dhismaha isku-dhaca hoose ayaa mararka qaar naloo horseeda hab-biyoodka aan loo baahnayn. Miyayna ahayn inaan biyo ku jirno oo aan ku riyoonno inaynu noqonno yaxaasyo markaan nahay geed qudhaca?
Sep29 06: 06